Iyo Linux Foundation Ruzhinji Hutano iri kugadzirira yekutanga pasipoti yepasirese COVID-19 | Linux Vakapindwa muropa
La Linux Foundation Ruzhinji Hutano rakafumurwa mazuva mazhinji apfuura zvinangwa zvekutanga chirongwa chekugonesa kusabatana uye kuvimbika kwechokwadi kweECVID zvitupa, semwedzi ichangopfuura ivo vakadzidza nyaya dzehurumende dzakatanga kugadzira nekushandisa masisitimu eCOVID, kusanganisira iyo EU digiti COVID Chitupa (yaimbove EU Dhijitari Green Chitupa).
Nyika yese yanga ichirwira iyo coronavirus kwegore nehafu, mamiriro ehutano akakonzera kurasikirwa kweanosvika mamirioni mana ehupenyu. Mumamiriro ezvinhu akadaro, majekiseni akapa tariro huru yekudzora denda iri, kana kuita kuti rinyangarike. Vazhinji vakafunga kuti vanhu vazhinji vanozobayiwa majekiseni, asi zvakawanikwa zvinoshungurudza zvakanyanya kana zvichienzaniswa nezvaitarisirwa.
Izvi zvinokonzerwa nekushomeka munyika zhinji, asiwo neruzivo rwekunyepa uye paranoia nezve majekiseni aya. Kunyangwe mumatanho epamusoro evakadzidza, unogona kuwana vanhu vanopokana kuti majekiseni akaitirwa kuita zvirongwa zve lousy.
Kuburikidza nekutaurirana uye zvidzidzo zvakaitwa, taura kuti vaona matambudziko maviri akakomba yeiyo huru ndeye kushomeka kwekutendeseka kwepasirese kuvakwa, hurongwa hunosimbisa mune imwechete kutonga kunogona kushandisa kuita sarudzo yekuti wobvuma kana kusagamuchira chitupa chakasainwa neimwe masimba.
Pachine mibvunzo yakawanda iyo vanogadzira mutemo nevezvikwata zvetekinoroji nezve maitiro ekuvaka nekutarisira masisitimu eCOVID, sevapi vevatengesi munzvimbo ino vachiri vatsva uye zvirevo zvichiri kupedzwa.
Izvi zvisati zvaitika iyo Linux Foundation Ruzhinji Hutano (LFPN) yatove kushanda mu Global COVID Chitupa Network, rudzi rwechokwadi rekodhi runobatsira kuyedza chimiro chemushonga.
Iyi Global Network yeCOVID Zvitupa (GCCN), inoziviswa se «a Kutanga Kugonesa Inopindirana uye Yakavimbika Verification yeCOVID Zvitupa Pakati peMasimba Ekuvhurwa Kwakachengeteka kweMiganhu ». Masangano, hurumende, vagadziri uye mamwe akawanda achashanda nenheyo kugadzira inovimbwa yepasi rese registry network uye protocol. izvo zvicharerutsa kuongororwa kwechokwadi kweakasiyana zvitupa zvekubiwa zvakapihwa nenyika dzakasiyana. Iyi ndiyo pasipoti yeCovid-19 yenyika dzese.
Sekutsanangura kunoita Brian Behlendorf, CEO weLinux Foundation yeBlockchain, Hutano neIdhiity, achitaura kuti GCCN yakakosha, nekuti "mafungu ekutanga ekunyorera kuratidza chinzvimbo cheCOVID akakundikana kuratidza humbowo uhwu kupfuura nyika imwechete kana nyika imwechete" , mukuwedzera pakuratidza kuti GCCN ichagadzirisa dambudziko iri "kuremekedza zvakavanzika zvepamusoro nekuvimbika."
Mukuwedzera iyo LFPH iri kuvakwa muchikamu kuti iwirirane neiyo COVID digiti yedhijitari ye European Union, zvichiri kutaurwa kuti chivimbo chepasi rose chekuvaka uye maturusi akagadzirira-kuendesa achiri kudikanwa kuvaka masisitimu anoenderana mune dzimwe nyika chipingamupinyi chaicho chekuvhurazve zvakachengeteka miganhu pakati penyika dzeEU nenyika dzechitatu.
Isu tichagadzira yepasirese network yeakavimbika marejista, dhairekitori yeakavimbika peer zvinyorwa. Kubudikidza nedhairekitori, hurumende nemubatanidzwa wemaindasitiri vachakwanisa kutsvaga kumwe kuvimba kwehurumende kana marekodhi emubatanidzwa uye kusarudza zvichienderana neruzivo rwunopihwa kuti vagamuchire zvitupa zvavo. Ivo vanove zvakare vanokwanisa kushambadza yavo yavo zviratidzo kune zvinyorwa zvevowo vane mvumo vanopa, kune dzimwe nyika kugamuchira.
LFPH iri kuteverawo chirongwa cheGood Health Pass Collaborative (GHPC) chekudyidzana, uyu mubatanidzwa weindasitiri wakatsanangura misimboti nemipimo yezvitupa zveCOVID.
Tichatanga nehurema hutongi hwehurongwa hwevezera rebhodhi. Nekufamba kwenguva, vezera rinotora chikamu vanozogadzira yemhando yekutonga, vachitsanangura ramangwana shanduko yebasa.
Finalmente Kana iwe uchifarira kugona kuziva zvakawanda nezvazvo nezve katsamba, unogona kutarisa chinyorwa yekutanga mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Linux Foundation Ruzhinji Hutano iri kugadzirira yekutanga yepasi rose COVID-19 pasipoti